एन्फाका अध्यक्ष प्रत्यासी मणि कुँवरसँगको अन्तर्वार्ता
चैत ८, २०७४| प्रकाशित १३:४७
काठमाडौं- अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का आगामी चैत १४ मा हुने केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणी कुँवरको समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने चुनावको महोल तातिरहेको छ।
एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा भ्रष्टाचारको आरोपमा विश्व फुटबल महासंघ फिफाबाट प्रतिबन्धमा परेपछि बाँकी रहेको एक वर्षको कार्यकालका लागि विशेष साधारणसभाबाट नेतृत्व चुनिएको थियो। त्यतिबेला कुँवर उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। कुँवरले उपाध्यक्षमा दीपक खाती र उपेन्द्रमान सिंहलाई पछि पारेका थिए।
कुँवर पक्षलाई एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्रलाल श्रेष्ठको समर्थन छ। शेर्पासँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका कुँवरलाई गणेश थापाको पनि समर्थन छ।
दुवै पक्षले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्। एन्फामा अध्यक्षका प्रत्यासी मणि कुँवरसँग निर्वाचनको तयारी र एजेन्डाबारे नेपाल लाइभका सीताराम कोइरालाले गरेको कुराकानी:
एन्फा निर्वाचन नजिकिँदैछ। तयारी कस्तो भइरहेको छ?
चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा छ। जिल्लाका साथीहरुलाई भेटेर सुझाव लिने काम भइरहेको छ। हाम्रो पक्षमा एकदम राम्रो माहोल पाएको छु। पहिलाको भन्दा अहिले माहोल सुध्रिएको छ।
बीचमा हाम्रो पक्षमा केही माहोल बग्रिएको थियो। अहिले विस्तारै हाम्रो पक्षमा साथीहरु आउनु भएको छ। सुझाव दिइरहनु भएको छ।
एक साताअघि हामी सबै जिल्ला घुमेर आयौं। हामीले सुदूरपश्चिमदेखि पूर्व घुम्मौं। साथीहरु हामीप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ।
नेपाली फुटबलको विकासका लागि तपाईंले अघि सारेका एन्जेन्डा के-के हुन्?
अहिले भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिने हो। त्यसमा राम्रो व्यस्थापन गरेर अघि बढ्ने हो। प्रतियोगिता, टेक्निकल किमिटि र मार्केटिङ कमिटीलाई बलियो बनाउने हाम्रा मुख्य एजेन्डा हुन्।
हाम्रा एन्जेन्डामा जिल्ला तथा क्लबका साथीको प्रतिक्रिया पनि राम्रो आइरहेका छन्।
एन्फा निर्वाचनमा तपाईंका विपक्षीले आफ्नो पक्षको समर्थक सार्वजनिक गरिसेका छन्। तपाईंहरुको आँकलन के हो?
अहिलेसम्मको स्थितिमा हामी जिततर्फ अघि बढेका छौं। तर, अहिले नै यति भोट भनेर भन्न मिल्दैन।
विपक्षीहरुले फेसबुकमा लेखेर भोट सार्वजनिक गरेका हुन्। हामीले विपक्षीजस्तो मिडियाबाजी पनि गरेका छैनौं। मैले आफ्ना साथीभाइको मत लिने प्रयास गरिरहेको छु।प्रतिबद्धता हाम्रो पक्षमा बढी आएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : 'यो निर्वाचनपछि नेपाली फुटबलमा नयाँ युग सुरु हुन्छ'
मणी कुँवरलाई जिताएमा नेपाली फुटबलले के पाउँछ? तपाईंलाई नै किन छान्ने?
गत वर्षको निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा विजयी भएपछि मैले काम गरेर देखाएको छु। अब निर्वाचित भएको खन्डमा तीन महिनाभित्र नेपाली फुटबल विकासका लागि सबै फुटबल प्रेमीलाई फिल हुनेगरी काम गरेर देखाउँछु। विभिन्न कमिटि बनाएर अघि बढ्छौं।
विगत लामो समय एन्फा नेतृत्वले संस्थालाई पारिवारिक ढंगले चलाएको र पारदर्शी नभएको भन्ने आरोप छ। तपाईंलाई त्यही पक्षको उम्मेदावार भनिन्छ नि?
आरोप लगाउन सजिलो छ। तर, काम गरेर देखाउन गाह्रो छ। अहिले परिवर्तनका कुरा गरिरहेका साथीहरु विगत २२ वर्षदेखि फुटबलमा छन्। उहाँहरुले लामो समय फुटबलमा काम गर्नु भएको थियो। तर, म फुटबलमा आएको २ वर्ष पनि पूरा भएको छैन। २ वर्षको अवधिमा मैले आफ्नो काम कारबाही गरिरहेको छु, जुन सबैलाई थाहा छ।
उहाँहरुले लगाएको आरोपमा सत्यता छैन। किनभने उहाँहरु यही संस्थामा बसेर बीसौं वर्ष काम गर्नु भएको हो। अझ उहाँहरुले महत्वपूर्ण पद पनि सम्हालिसक्नु भएको छ। आफूले चाहिँ केही नगर्ने अनि खालि नेतृत्वले मात्र केही गरेन भनेर दोष दिने काम राम्रो होइन।
तपाई उपाध्यक्ष भएपछि काम गरेको बताउनु भयो। तर, फुटबलको मेरुदन्ड मानिने लिग सञ्चालन हुन सकेन नि?
लिग हामीले गर्न चाहेका हौं। तर, थ्रीस्टारसँगको असहमतिले गर्दा केही ढिला हुन गएको हो। अहिले लिगका लागि हुनुपर्ने सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। बजेट पनि तय भइसकेको छ। तालिका पनि तय छ। अहिले तुरुन्त लिग गर्न सकिने अवस्था छ। यदि, म अध्यक्षमा विजयी भएको खन्डमा तुरुन्त लिग सञ्चालन हुन्छ।
फिफाबाट प्रतिबन्धमा परेका एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको समर्थन तपाईंलाई छ। के प्रतिबन्धमा परेको व्यक्तिले कसैको पक्षमा लबिङ गर्न मिल्छ?
गणेश थापा नेपाली फुटबलमा लामो समय काम गरेको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले फुटबलमा राम्रो मान्छे आउनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ।
फुटबल राम्रो हुनुपर्छ भन्ने अधिकार सबैलाई छ। यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन।
अर्कोतर्फ समर्थन गर्ने/नगर्ने आफ्नो कुरा हो। साथीभाइको हिसाबले भेटघाट, कुराकानी गर्न सबैले पाउँछन्। त्यो उहाँले पनि गर्नु भएको हो।
विपक्षीले फुटबलमा आमूल परिवर्तन गर्ने नारा दिएर समर्थन बटुलिरहेका छन्। तपाईंको बुझाइमा फुटबलमा परिवर्तन के हो ?
नारा मात्र परिवर्तन भएर केही हुँदैन। उहाँहरु नेपाली फुटबलमा बीसौं वर्ष लाग्नु भएकै हो। महत्वपूर्ण पद पनि नपाउनु भएकै होइन। तर, काम गर्नु भएन। विभिन्न बाहानमा नेपाली फुटबललाई अस्थिर बनाउनु भयो। परिवर्तनका नाममा विभिन्न आन्दोलन गर्नु भयो, तर काम गर्नु भएन। लाभको पद लिने अनि काम केही नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। हामी काममा विश्वास गर्छौं। काम गरेपछि आफैं परिवर्तन देखिन्छ। बीसौं वर्ष फुटबलमा बिताएर केही नगर्ने अनि अहिले परिवर्तनको नारा मात्र दिएर हुन्छ?
विपक्षीहरुलाई तपाईंको सन्देश के छ?
उहाँहरु र मेरो आ–आफ्नै एजेन्डा छन्। व्यक्तिभन्दा नेपाली फुटबलको हितमा काम होस्। फुटबलको विकास होस् भन्ने मेरो चाहाना हो।
Tapai manxe la kasai lai kahe garna diya po yo ta euta yesto question ho jun ko ans tapai sanga nai xa mani kuwar ji pariwartan ta desh ma hudae xa ta euta pariwar la chalayako anfa ma kina na huna naya socha ra bichar bhaya ko manxe ko hatt na janu parxa anfa kheldae ko awastha kheldae la nai bujna sakxa bt kheladi ko lagi sochna manxe ko jaruri xa